Filoha Hery Rajaonarimampianina : Filoham-pirenena malagasy voalohany nitsidika ny Alliance française
Sady toeram-pampianarana teny frantsay no sehatra ho an’ny fifanakalozana ara-kolontsaina. Ny filoha, Hery Rajaonarimampianina, no hany filoham-pirenena nitsidika ny Alliance Française tetsy Andavamamba. Omaly, taorian’ny fanolorana ny mari-boninahitra ho an’ilay mpanao hosodoko, Roland Raparivo, no …Tohiny
Dôma Ankorondrano sy Antsahamanitra
Hetsika iray ho an’ny mpankafy Rock Malagasy. Hotanterahina indroa miantaona ny « Tana in rock », hiarahana amin’ireo andrarezin’ny mpiangaly rock Malagasy. Etsy amin’ny Dôme Ankorondrano ny seho voalohany ny zoma 01 septambra izao ary etsy Antsahamanitra …Tohiny
Taorian’ny fampisehoana tetsy amin’ny CCesca Antanimena, hiverina indray amin’ny seho takariva nahalalana azy i Fara Kely ary manome fotoana ireo mpankafy azy etsy amin’ny Piment Café Behoririka, anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Ho entiny …Tohiny
Telozoro : Andrefanambohijanahary
Na miparitaka aza ireo mpikambana ao aminy, miezaka ny mamelona ireo hira nahafantarana ny tarika Njila ny lehiben’ny tarika. Santionany amin’izany ny « Revy Njila » hotanterahina etsy amin’ny Telozoro Andrefanambohijanahary anio alina manomboka amin’ny 9 ora. …Tohiny